ကြေးမုံဂျီး တရုတ်စစ်တပ်ပစ်လို့ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်မှာ လူတသောင်းကျော်သေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကြေးမုံဂျီး တရုတ်စစ်တပ်ပစ်လို့ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်မှာ လူတသောင်းကျော်သေ
ကြေးမုံဂျီး တရုတ်စစ်တပ်ပစ်လို့ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်မှာ လူတသောင်းကျော်သေ
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Dec 30, 2017 in Best Web Awards, History | 1 comment
၁၉၈၉ခုနှစ် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် ဆန ်ဒပြမှုအား တရုတ်စစ်တပ်၏ ဖြိုခွဲမှုတွင် အနဲဆုံး လူတသောင်း ပစ်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်း အသစ်ထုတ်ပြန်သော ယူကေနိုင်ငံထုတ် မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုအရေအတွက်မှာ တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗြိတိသ ျှ သံအမတ်ကြီး အလံဒေါ်နယ်ထံမှ လာသော လ ျှို့ဝှက် သံတမန် ကေဘယ်လ်ကြေးနန်း ပေးပို့ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ သတင်းရင်းမြစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တဦး၏ သူငယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ခန့်မှန်းချက် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ရာပေါင်းများစွာမှ ထောင်ဂဏန်းစွန်းစွန်းသာ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ဇွန်လကုန်ပိုင်း တရုတ်အစိုးရ ကြေငြာချက်တွင်မူ အရပ်သား နှစ်ရာ နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ၁၉၈၉ ဇွန်၄ တန်ပြန်တော်လှန်ရေး အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းကြောင့် သေဆုံးသည်ဟုဆိုသည်။ ။။။။။ ။။။။
မစ်စတာဒေါ်နယ် ကြေးနန်းမှာ ဇွန်၅ရက်နေ့စွဲဖြစ်ပြီး သူ့သတင်းဇစ်မြစ်မှာ လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တဦး၏ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေမှ သူ့ထံပေးပို့ခဲ့သည်။ ထိုကောင်စီမှာ တရုတ်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ပင်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဥကဌလုပ်သည်။ ကြေးနန်းကို ယူကေအမျိုးသားပြတိုက်တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး အောက်တိုဘာလတွင်မှ လ ျှို့ဝှက်အဆင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းပေးသူမှာ ယခင်ကလဲ ယုံကြည်ရပြီး အချက်အလက် အစစ်အမှန်ကို ခန့်မှန်းခြေ၊ ကောဠာဟာလများနှင့် အသေအချာ ခွဲခြားတတ်သူဟု မစ်စတာဒေါ်နယ်မှ ဆိုသည်။ ။။။။ ။။။။။
ကြေးနန်းပေးပို့ချက်တွင် ကျောင်းသားများ သိထားသည်က သူတို့အား ရင်ပြင်မှ ထွက်ခွာရန် တနာရီ အချိန်ပေးထားသည် သို့သော် ငါးမိနစ်အကြာတွင် တရုတ်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သည်။ ကျောင်းသားများက လက်ခြင်းချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း မြက်ရိတ်သလို ပစ်ချခံရသည်။ သေဆုံးသူ အလောင်းများကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စစ်သားများ စုပုံထားပြီး ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုးယူသယ်မသွားသည်။ ရုပ်အလောင်းများကို မီးရှို့ပြီး ရေမေ ျှာရှင်းလင်းပစ်သည်။ ဒဏ်ရရသော ကျောင်းသူလေးဦးှမှ အသတ်ချမ်းသာပေးရန် တောင်းပန်သော်လဲ လှံစွပ်ထိုး အသတ်ခံရသည်။ မစ်စတာ ဒေါ်နယ်မှ ဆက်ပြောရာတွင ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရန် လွန်စွာနီးကပ်နေပြီဟု နိုင်ငံတော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အချို့ ထင်မှတ်ကြသည်။ ။။။။ ။။။။။။
စစ်တပ်အား မစေလွှတ်ခင်အထိ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တရုတ်ကူမြူနစ်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး အစိုးရဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲဖြစ်သည်။ ထိုသတ်ဖြစ်မှု ဖြစ်ရပ်များမှာ တရုတ်ပြည်တွင် လွန်စွာ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်နေစဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရေးအခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော အောက်မေ့ပွဲ မှန်သမျကို ပိတ်ပင်ထားပြီး အင်တာနက် အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးချက် ဝေဖန်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သို့သော် ကဗာ့နေရာအသီးသီး အထူးသဖြင့် ဟောင်ကောင် နှင့် ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံတို့တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ။။။။။။ ။။။။။။
<3 <3 မြစ်ဆုံရေကာတာလော်ဘီ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီကေဒါ ကြေးမုံဂျီး၏ဘဲ တရုတ်မခြစ်သူကြောင်ကြီး <3 <3
။။။။ ။။။။။ ။။။
Image caption A burning armoured personnel carrier (APC) on4June 1989, near Tiananmen Square
Mr Donald’s telegram is from5June, and he says his source was someone who “was passing on information given him byaclose friend who is currentlyamember of the State Council”.
Image caption Student hunger strikers in Tiananmen Square on 14 May 1989
Mr Donald said the source had been reliable in the past “and was careful to separate fact from speculation and rumour”.
Mr Donald added that “some members of the State Council considered that civil war is imminent”.